काहाली लाग्दो र उराठ लाग्दो जिवन - शुभयुग
काहाली लाग्दो र उराठ लाग्दो जिवन
प्रकाशित मिति: २०७८ भाद्र ५, शनिबार (३ महिना अघि)
५३१ पाठक संख्या
काहाली लाग्दो र उराठ लाग्दो जिवनको कथाहरु र बेथाहरु कहाँ, कसरी र कसलाई सुनाउन जाउँ आज । यो स्वार्थी दुनियमा, सुनाम सुनाउने ठाउँ र सुन्ने कोही छैन्, नसुनाउँ मन भक्कालिएर आउँछ । नसुनाउँ मेरो नयनबाट आँसुका धाराहरु बगाएर कसरी बसौं । सधै दिन रात यसरी नै जिवन बिताउनु पर्ने हो कि भनी केही शब्द लेख्दैछु आज म ।
भनिन्छ नि ‘दैवले पनि साथ नदिएपछि कसको के लाग्छ र ?’ दैवले नि ठगेर गएपछि यो संसारमा कसको के नै लाग्दो रहेछ र । ओठमा हाँसोको दिन भने कहिल्यै भएन मेरो यो जिवनमा । सधै पीर ब्यथा, अनेक कुराहरुको बाबजुतका साथ जिवन विताउने कोशिस गरिरहेको छु ।
विं सं २०४३ फागुन २३ गतेका दिन नीलकण्ठ नगरपालिका १२ स्थित एक गरिब परिवारमा पिता लिलानारायण श्रेष्ठ र माता बिन्दाकुमारीको कोखबाट दोस्रो सन्तानको रुपमा यस धर्तीमा जन्म लिन पुगें । जब माताको कोख (गर्भबाट) रुदैं यस धर्तीमा जन्म लिन पुगें । म दिन प्रतिदिन ठुलो हुँदै गएँ अनि विष्णुकुमार श्रेष्ठ नामले परिचित हुन पुगे । जब म ८ महिनाको बाल्यकाल तथा दुधे बालक थिएँ, त्यतिबेला मेरो जीवनमा भयानक आँधी बेहरी आयो । भगवान विष्णुको नामले जसरी परिचित भए तर भगवानलाई यो नाम सुन्न चाहेन ।
बिडम्बना त्यो आँधी बेरीले मलाई सधै सधैको लागि बिर्सन नसक्ने दुर्घटनामा पारिदियो । खै कसरी भनौ । मलाई सम्झन पनि मन लागेको छैन । मन रुन थाल्छ । काहाली लाग्दो त्यो मध्यरात । सबै जना चिसो भुइँमा सुतिसक्नु भएको थियो । त्यस रात अचानक मेरो दुवै गोडा आगोले काम नलाग्ने गरी जल्न पुगे ।खै कसलाई दोष दिउँ ? भाग्यलाई, कर्मलाई या आफैंलाई । अचानक दुवै गोडा घुमेछन् । म अपाङ्ग बन्न पुगेंछु । सदा–सदाको लागि म अपाङ्ग भएँछु । अनि मेरो भविष्य नै अन्धकार भयो ।
रातको समयमा बाबा–आमा निदाई सक्नु भएको बेला जब मेरो गोडा आगोमा परी पोलिएको बाबा, आमाले थाहा पाउनु भयो, त्यसपछि मलाई केराको पातमा सुताएर छिमेकीहरुको सहयोगमा जिल्ला सदरमुकाम धादिङ अस्पतालसम्म लानु भयो । तर त्यहाँ मेरो उपचार हुन सकेन । जिल्ला अस्पतालमा मेरो उपचार हुन नसकेपछि मलाई त्यहाँबाट कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौंमा उपचारको लागि रिफर गरियो । त्यसपछि मलाई बाबा, आमाले कान्ति अस्पतालमा लानु भयो । बाबाले मसँग आमालाई छाडेर मेरो उपचारका लागि केही पैसा जम्मा गर्न गाउँ फर्किनु भयो ।
गरिबी परिवार अनि यस्तो भयानक अबस्थामा कसले सहयोग गर्छ र । दुख परेको बेलामा आफ्ना आफन्तहरुले समेत ताली बजाएर रमिता हेर्नेहरु धेरै थियो । गरिबलाई जताबाट पनि पीर, चिन्ता, टेन्सन नै टेन्सन हुने रहेछ । गरिब परिवारमा जन्म भएको र छोरामध्येको पहिलो सन्तानको अवस्था देख्दा बाबा/आमाको मन कस्तो भयो होला ? आज म अनुमानामत्र गर्न सक्छु, शब्दमा यहाँ उल्लेख गर्न सक्दिन । दिनरात बढ्दै गयो, मेरो घाउँ दुख्दै गयो । बुबाले मेरो आफ्नो नाममा भएका सम्पति समेत बेचेर मेरो उपचार गर्नु भयो । कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा दुवै गोडा काट्नु पर्यो । दुवै त्यसपछि म ८ महिनासम्म त्यहीँ डाक्टरको अब्जरभेसनमा रहनु पर्यो ।
जब ८ महिना पूरा भएपछि मलाई डाक्टरले घर पठाई दिनु भएछ । बाबा आमालाई मेरो अबस्थाले धेरै पिर पर्यो । त्यति बेला मेरा आफन्तहरुले भने केही सहयोग गरेनन् भन्ने मैले ठूलो भएपछि थाहका पाएँ । यसै क्रममा अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पूर्नस्थापजना केन्द्रद्वारा संचालित सिआरसिपी कार्यकर्ता नातिबाबु भट्ट सरले थाहा पाउनु भएछ । उहाँ मेरो घरमा आउनु भयो । त्यसपछि मेरो अवस्था हेरेर अपाङ्ग बाल अस्पतालमा लान सल्लाह दिनु भयो । मेरो बाबाले उहाँको सल्लाह बमोजिम मलाई त्यहाँ लानु भयो । त्यहाँ लगिसकेपछि मलाई कृतिम गोडा निर्माण गरी हिडडुलमा सहज बनाई दिनु भयो ।
म त्यही कृतिम गोडा लगाएर शिशुदेखि बाल्यकाल हुँदै जिवन पार गर्दै आएको छु । यही कृत्रिम गोडाको साहाराले क्याम्पस सम्मको अध्ययन पूरा गरेँ । यसै सिलसिलामा मैले यही अपाङ्ग बाल अस्पतालको कर्मचारीको रुपमा काम गर्ने अबसर पनि पाए । यसै संस्थाद्वारा संचालित सिआरसिपी अन्तर्गत चितवनमा अर्थोसिस एण्ड प्रोथोसिस विभागमा काम गर्दै आएको आएको छु । अहिले आफ्नो कृत्रिम गोडा आफंै बनाउन सक्ने भएको छु ।
र मेरो उमेर पनि डल्किदै गयो । लगन गाँठो जुर्ने साय पनि भयो । घरमा विवाह गर्नुपर्छ भनेर बाबा आमाले भन्नु भयो । अनि म विवाहको तयारीमा जुट्न थाले । मेरो विवाह पनि भयो । बालबच्चा पनि भयो । पहिलो सन्तान छोरा अनि छोरीको आगमन भयो । म लगायत सबै परिवार खुसी थियौं । सबैको प्यारो छोरा छोरी बन्न पुगे । बाबा आमा, दिदी र भाइको मायाले मेरो छोरा निकै खुसी थियो । सधै म घर बस्न नपाउने । किन कि जागिरको सिलसिलामा घर छोड्न पर्ने थियो ।
जब बाबाको माया मेरो भाइले दिइ रहेको छ । र मलाई यहाँसम्म ल्याउने श्रेय अपाङ्ग बालअस्पताललाई जान्छ । यही संस्थाले गर्दा नै म यहाँसम्म आउन सकेको छु । मेरो दैनिक जिवन अहिले सहज भएको छ । यही कृत्रिम गोडाको साहायताले नै हिडडुल गर्न सहज बनाएको छ । कृत्रिम गोडा लगाएरै साङग सरह काम गर्न सक्षम भएको छु । म एक ठाउँमा कोचिएर अरुको सहयोगमा बाँच्नु परेको छैन । यदि यो संस्था नभएको भए म जिवनभर अन्धकारमा बस्नु पर्ने थियो ।
अरुको अपमान, घृणा सहेर बाँच्नु पर्ने अबस्था हुन्थ्यो । त्यसैले म यस संस्थालाई बाँचुनजेल सम्झन चाहान्छु । यस संस्थाको अझै उन्नति प्रगति भएको हेर्न चाहान्छु । म जस्ता धेरै अपाङ्ग बालबालिकाको जिवनलाई पुनस्थापना गर्न सहयोग पुगोस भन्न चाहन्छु ।